Daafaca Manchester United ee Marcos Rojo oo heshiis la gaaray kooxdiisa xigta ee uu ku biiri doono – Gool FM
Daafaca Manchester United ee Marcos Rojo oo heshiis la gaaray kooxdiisa xigta ee uu ku biiri doono
(Manchester) 07 Jan 2021. Sida wararku ay sheegayaan daafaca Manchester United ee Marcos Rojo ayaa heshiis la gaaray kooxdiisa cusub ee uu ku biiro doono.
Marcos Rojo ayaa la soo warinayaa inuu heshiis labo sanadood ah la gaaray Boca Juniors si uu ugu dambeyn u soo afjaro waayihiisa ciyaareed ee Kooxda Manchester United.
Wargeyska Sportsmail ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa horraantii todobaadkan daabacay in xiddiga reer Argentine uu ku jiro wadahadallo ah sidii uu dib ugu laaban lahaa dalkiisa, isagoo kaliya 15 kulan u saftay Man United labadii sano iyo barkii ee ugu dambeeyay.
Laakiin iyadoo Boca aysan dooneynin inay bixiso lacagta kala iibsiga, waxa uu wajahayaa inuu heshiis la galo United si uu u kala furfuro qandaraaskiisa, isla markaana uu ugu tago si bilaash ah, sida laga soo xigtay Shabakadda ESPN.
Haddii Man United aysan dooneynin inay tanaasul sameyso, kaddib Rojo wuxuu wajahayaa inuu sii fadhiyo Old Trafford lixda bilood ee ka harsan qandaraaskiisa ka hor inta uusan ugu dambeyn dhaqaaqin xagaaga.
Rojo ayaa 16 milyan oo gini kaga soo tagay Sporting Lisbon waxaana uu ahaa saxiixii ugu horreeyey xagaaga ee tababare Louis van Gaal uu keeno Man United sanadkii 2014-kii.
Laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxa uu ku dhibtooday inuu boos ka helo oo uu si joogto ah uga hoos ciyaaro labada tababare Jose Mourinho iyo Ole Gunnar Solskjaer.
Waxa uu garoommada kaga maqnaa tan iyo bishii October dhaawac kubka ah, waxaana lagu soo koobay 122 kulan oo uu u saftay Red Devils intii lagu jiray dhaawaciisa lix sano iyo bar uu la joogay kooxda.
Wuxuu qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore amaah ku qaatay Kooxda Estudiantes, laakiin wuxuu awooday oo kaliya inuu sameeyo safasho kali ah.
Kooxaha Sheffield United iyo Newcastle United ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay xiisaynayaan saxiixa 30-sano jirkaan.
Ku biiristiisa Kooxda Boca waxay ka dhigi doontaa Rojo inuu dib ula midoobo saaxiibkiisii hore ee ay xulka qaranka Argentine ka wada tirsanaayeen ee Carlos Tevez, kaasoo si sumcad darro ah uga gudbay kala qeybsanaanta magaalada Manchester kaddib labo sano oo uu hoggaaminayay Sir Alex Ferguson uu ku biiray Manchester City sanadkii 2009-kii.
WAR CUSUB: Tababaraha Chelsea ee Frank Lampard oo doonaya inuu noqdo Macallinka Kooxda Barcelona
Kaddib markii uu xalay labo gool ku soo dhaliyey garoonka San Mames, Lionel Messi oo fikta sare ka soo galay tartanka loogu jiro Pichichi Trophy